Remote Control, Textify uye zvimwe zvinoshandiswa zvemahara izvozvi chete | IPhone nhau
Zuva idzva rinokwira mukati IPhone nhau uye senguva dzose, yekutanga kanakutengesa uye kudzikisira pamitambo uye kunyorera ye iPhone nePadad. Uye sezvaungafungire kare, hatigone kuti vatize, kunyanya kana zviri zvekushandisa kwemahara.
Asi usakanganwa kuti izvo zvakaderedzwa zvauchaona pazasi zviri Nguva Yakatemwa. Kubva IPhone nhau Chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti iyo mitambo uye kunyorera kuri kupihwa kuri kupihwa panguva yekuburitsa iyi posvo; Nehurombo, ivo vanogadzira havataure kuti vacharamba vachisimudzira kwenguva yakareba sei, uye sevha haisati yagadzira hunyanzvi hwekuuka. Naizvozvo, tinokukurudzira kuti ukurumidze kurodha pasi mitambo nemaapplication anokufadza nekukurumidza kuitira kuti utore mukana wekudzikiswa. Rangarira kuti kana iwe wakabhadhara chimwe chinhu kwavari uye ivo vasiri kune vako chaunofarira, unogona kukumbira kudzoserwa uye kudzoreredza mari yako. Zvikanzi, handei.
1 Remote Control Pro yeMac
3 Emoji kamera
4 Kuvhara Vakafa
Remote Control Pro yeMac
Nhasi tichatanga nekushandisa kukuru kune vese avo, kuwedzera kune iPhone uye / kana iPad, zvakare vane Laptop kana desktop Mac. Ndezve Remote Control Pro yeMac, Anwendung iyo, sezita zvarinoratidzira, ine kudzora kure kweMac.
Nekuda kweichi chishandiso, yako iPhone kana iPad ichave izere kure kure kudzora kubva kwaunogona kudzora yako Mac komputa, zvakare kuve nayo keyboard uye chaiyo trackpad uye inoshanda kwazvo.
Mamwe emabasa akatanhamara:
Vhura uye uvhare kunyorera pane yako Mac
Muka kana kuisa Mac yako kurara
Tangazve kana kuvhara Mac yako
Chengetedza kutamba, vhoriyamu ...
Chinja kupenya kwescreen
Kuti ushandise Remote Control Pro yeMac Iwe uchafanirwa kurodha pasi Mac Machena kunyorera mahara pane yako Mac uye kuti zvese zviri zviviri, Mac uye iOS chishandiso, zviri pasi peiyo imwecheteyo netiweki yeWi-Fi.
Remote Control Pro yeMac Iine mutengo wenguva dzose we € 1,09 asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Remote Mouse & Khibhodi - PRO7,99 €
"Textify" ndeimwe yeakakunda makuru ezuva, iko kunobatsira chaizvo iko iko iko kwatinogona kuve nemahara zvachose. Wakagamuchira kangani voicemail panguva isiri iyo, senge musangano kana panguva yekutamba, uye waifanira kumirira kuti uone kuti zvaive nezvei? Zvakanaka ipapo, Nyora chinja iwo meseji ezwi iwe aunogamuchira kuita mavara, saka unogona kuverenga.
Nyora inoshanda nemapurogiramu makuru ekutumira mamesejikune WhatsApp, Teregiramu, iMessage, Threema uye LINE Messenger, uye inotsigirawo mitauro yakawanda, kusanganisira Spanish.
Unogona kana tarisa mameseji ezwi unogamuchira kuti uwane zviitiko zvekarenda, nhamba dzenhare, nezvimwe.
Nyora Iine mutengo wenguva dzose we € 3,49 asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Nyora - Usaterere .. Verenga!2,99 €
Zvino sezvo vazhinji venyu muchiri kunakidzwa nezororo renyu, Emoji kamera inogona kunge iri basa rinobatsira kuita kuti ndangariro dzako dziwedzere kunakidzwa. Uye sezvaungave watofungidzira, neapp iyi iwe uchigona wedzera yakasarudzika emojis uye mafirita kumifananidzo yako. Uye zvechokwadi, iwe unogona zvakare kuisa vignettes, tenderera, girazi maitiro, gadzirisa kusimba kwemafirita, kupenya uye kugovana pasocial network senge Twitter, Facebook, Tumblr, nezvimwe.
Emoji kamera Iine mutengo wenguva dzose we € 1,09 asi ikozvino unogona kuiwana yemahara kwenguva pfupi.
Emoji - yakasarudzika mafirita0,99 €
Uye kupedzisa nhasi China kupa tichazviita nemutambo unonakidza uye wakapusa watatotaura nezvazvo pane imwe nguva. Ndi "The Kuvhara Vakafa", a pikicha-yakavakirwa mutambo wakafuridzirwa nenyika yeZombies izvo, zvisinei, hazvizokupe chero kutya.
Makanika ayo akareruka, izvo hazvireve kuti mutambo uri nyore; zvakare, sezvaunofambira mberi, zvinhu zvinowedzera kuomarara. Zviratidze izvozvi! Zviri mahara!
Kuvharira Vakafa: Zombie Towervakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Remote Control, Textify uye zvimwe zvinoshandiswa zvemahara chete izvozvi